Strategy - Famolavolana
Mahita drafitra tsara avy amin'ny mpamorona manerantany.
Diniho ny famolavolana tsara
Makà vokatra mahomby amin'ny marika manerantany.
Hitrandraka ny vokatra mivoatra
Mahita tetikasa maritrano lehibe indrindra avy amin'ny arisialy manerantany.
Hikaroka ny maritrano lehibe
Hamarino ny famolavolana lamaody famoronana avy amin'ny mpamorona lamaody iraisam-pirenena.
Diniho ny famolavolana lamaody famoronana
Mahita drafitra sary lehibe indrindra avy amin'ny mpamorona sary manerantany.
Diniho ny endrika sary lehibe indrindra
Mahita drafitra stratejika lehibe indrindra avy amin'ireo masoivoho endrika manerantany.
Diniho ny famolavolana paikady lehibe indrindra
Alakamisy 23 Septambra 2021
Trano Fonenana Nentanin'ny aingam-pitiavana ny mpanjifa ho an'ny trano fonenana manan-tantara, ity tetikasa ity dia maneho ny fampifanarahana ny fampitaovana sy ny fomba amam-panao amin'ny fikasan'ny ankehitriny. Noho izany, ny fomba mahazatra mahazatra dia nofidina, namboarina ary nohamafisina tamin'ny kanona amin'ny famolavolana moderina sy ny teknolojia maoderina, ny fitaovana manoratra momba ny kalitao tsara dia nandray anjara tamin'ny famoronana io tetik'asa io - tena sarobidy ny Architecture New York. Ho lany mihoatra ny 5 tapitrisa dolara amerikana ny fandaniam-panambadiana, hanolotra ny fotodrafitrasa hamoronana anatiny manaitra sy manaitra, fa koa miasa sy mahazo aina.
Modely Fanabeazana Vaovao
Descry Taiwan Exhibition
Alarobia 22 Septambra 2021
Modely Fanabeazana Vaovao Ny fampirantiana, ao amin'ny Mountain Alishan, izay mahasarika mpizaha tany malaza any Taiwan, dia manambatra ny kanto amin'ny indostrian'ny dite nentin-drazana Taiwanese. Ny fiaraha-mientana amin'ny fizarana fampirantiana ity dia afaka mamoaka ny modely vaovao ara-barotra. Ao amin'ny fonosana tsirairay, ny mpizahatany dia afaka mahita fomba samihafa izay manome ilay lohahevitra mitovy, & amp & quot; Taiwan. & Amp; quot; Tafiditra ao amin'ny sehatry ny fampisehoana tsara tarehy ao Taiwan, ny mpitsidika dia hanana fahatakarana lalindalina kokoa momba ny kolontsaina sy ny indostria tiana Taiwanese.
Mpamono Afo Sy Mpamono Afo
Talata 21 Septambra 2021
Mpamono Afo Sy Mpamono Afo Ny fampitaovana fiarovana amin'ny fiara dia ilaina. Mpamono afo sy mpamono fiarovana, ny fampifangaroan’ireto roalahy ireto dia afaka hanatsara ny fahombiazan’ny fandosiran’ny mpiasa rehefa misy lozam-pifamoivoizana iray. Tapaka ny toerana misy ny fiara, ka ity fitaovana ity dia natao ho ampy kely kokoa. Azo apetraka amin'ny fiara tsy miankina izy io. Ny mpamono afo amin'ny nentim-paharazana dia fampiasa tokana, ary ity volavolan-dalàna ity dia afaka manolo mora foana ny liner. Azo antoka kokoa, mora ny mpampiasa miasa.
Fampiainana Ny Fampahavitrihana
Alatsinainy 20 Septambra 2021
Fampiainana Ny Fampahavitrihana Ny boaty Jewellery 3D dia sehatra fivarotana ifantohana izay nanasa ny vahoaka hampiasa ny haitao farany amin'ny fanontana 3D amin'ny alàlan'ny fananganana firavaka manokana. Nasaina nanangana ny habaka izahay ary nieritreritra avy hatrany - ahoana no hahavitana boaty firavaka raha tsy misy firavaka bespoke mahafinaritra ao? Ny vokatra dia sary sokitra ankehitriny noho ny halavan'ny loko izay nandrakotra ny hatsaran'ny hazavana sy ny loko ary ny alokaloka.
Alahady 19 Septambra 2021
Mobile Robotam-pandrefesana otrikaretina ho an'ny lojikaôlôgy. Rafitra serivisy serivisy no hanatanterahana ny fanaterana mahomby azo antoka, mampihena ny vinan'ny mpiasan'ny fahasalamana ho voan'ny aretina, miaro ny areti-mifindra eo amin'ny mpiasan'ny hopitaly sy ny marary (COVID-19 na H1N1). Manampy amin'ny fikarakarana ny fandefasana hopitaly amin'ny alàlan'ny fidirana sy ny fiarovana mora, ny famolavolana azy ireo amin'ny alàlan'ny teknolojia mahafinaritra. Ny unit robotic dia afaka mamindra autonomously amin'ny tontolo anatiny ary mampifanaraka ny fikorianana miaraka amin'ireo tarika mitovy, afaka manao ekipa robot miara-miasa.
Smart Dormusus Diffusor
Asabotsy 18 Septambra 2021
Smart Dormusus Diffusor Ny Agarwood dia tsy fahita firy ary lafo vidy. Ny fofony dia azo alaina amin'ny fandoroana na fitrandrahana, ampiasain'ny anatiny ary omen'ny mpampiasa vitsy. Mba hamotehana ireo fetrany ireo dia noforonina ny fofona manitra maintso sy ny takelaka agarwood vita amin'ny natiora taorian'ny fanandramana nandritra ny 3 taona nahitana drafitra 60, prototipe 10 ary fanandramana 200. Maneho maodely fomba fiasa vaovao azo trandrahana izany ary mampiasa toe-javatra ho an'ny indostria agarwood. Ny mpampiasa dia afaka mampiditra diffusor fotsiny ao anaty fiara, manamboatra ny fotoana, ny habetsany ary ny fofona manitra miaraka amin'ny fahafinaretana ary mankafy ny aromaterapy milentika amin'ny toerana alehany sy isaky ny mitondra fiara.
Tianay ny endrika am-boalohany sy ny famoronana, ny zavakanto, ny maritrano, ny lamaody, ny famolavolana sary, ny fanavaozana sy paikady famoronana. Isan'andro dia misafidy sy manaparitaka drafitra tsara isika mpanaingo talenta, mpanakanto mamorona, arisialy miovaova ary marika lehibe. Ny hamorona fankasitrahana sy ny fahafantarana manerantany ho an'ny endrika tsara dia ny tanjonay.
Perception Cafe Zoma 17 Septambra
Poise Jiro Azo Ovaina Dia Jiro Alakamisy 16 Septambra
Memento Fanokafam-Taratasy Alarobia 15 Septambra
Septambra 2021 (90)
Aogositra 2021 (93)
Jolay 2021 (93)
Jona 2021 (90)
Fanadihadihana famolavolana ny andro Zoma 17 Septambra
Tantara momba ny andro Alakamisy 16 Septambra
Famolavolana ny andro Alarobia 15 Septambra
Mpamorona ny andro Talata 14 Septambra
Ekipa mpamorona ny andro Alatsinainy 13 Septambra
Trano Fonenana Modely Fanabeazana Vaovao Mpamono Afo Sy Mpamono Afo Fampiainana Ny Fampahavitrihana Mobile Smart Dormusus Diffusor